CCD Tracing-edge Laser Cutting Machine Manufacturers, China, orylọ ọrụ, Ahịa - Shenzhen Simida Intelligent equipment Co., Ltd.
.Lọ > Ngwaahịa > Igwe laser > CCD Tracing-onu Laser tingcha Machine
High-arụmọrụ, multi-nzube UV laser ịcha igwe Non-kọntaktị na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu na elu-ọsọ dijitalụ galvanometer nhazi. Zere mmebi ezoro ezo kpatara site na ngwá ọrụ ma nwụọ nhazi nrụgide.
1. Product Introduction of the CCD Tracing-onu Laser tingcha Machine
â-¶High-arụmọrụ, multi-nzube UV laser ịcha igwe Non-kọntaktị ọrụ n'elu ikpo okwu na elu-ọsọ digital galvanometer nhazi. Zere mmebi ezoro ezo kpatara site na ngwá ọrụ ma nwụọ nhazi nrụgide.
â – ¶Iji 355nm ultraviolet laser. mkpụmkpụ ogologo, ike njupụta dị elu, obere ọnọdụ mmetụta ọkụ, iwepu mmiri jụrụ oyi, ihicha mmiri, ịcha na uzuzu na-eso nhazi usoro, nwere ike ibibi ngwa ngwa nke ihe ahụ ngwa ngwa iji nweta nhazi oyi.
â – ¶ Ọdịdị dị elu nke na-agagharị ọsọ ọsọ na nhazi nke ụzọ ọkụ na-efe efe nwere ike ịhazi ya ma kwadebe ya na igwe eji arụ ọrụ na ibudata ngwa ngwa, ma ọ bụ kwekọọ na akara SMT.
â – ¶Ọ nwere ike ịmata faịlụ DXF na GERBER, were kpochapụ ebu, ma mata ngwa ngwa, ịkpụ na mkpọpu ala. Ọ dabara adaba maka nhazi ihe siri ike, siri ike na ngwaahịa siri ike.
â-¶CCD akpaka n'ọnọdu akwụ ụgwọ deformation ọrụ nwere ike ọzọ na-emegharị ka deformation nke ngwaahịa, na ukwuu ahazi akpaka ihu-achọta na ịcha akpaka ụgwọ ọrụ nwere ike imeghari ndiiche kpatara nrụgide nrụgide na usoro gara aga, yana mbepụ dịkwuo ire ụtọ.
â ¶ ¶Okike nke ikpo okwu okpukpu abụọ na-echekwa oge nke ntuziaka ma ọ bụ akpaka manipulator nnọchi nke ihe, nke karịrị arụmọrụ nke otu ụdị akụrụngwa na ahịa site na 30%.
â-¶Mobile ekwentị igwefoto modul osisi, mkpisiaka ude modul ọnwụ, T-kaadị ebe nchekwa kaadị, FPC mgbanwe circuit osisi elu-ọsọ laser ọnwụ, ịcha ọkpụrụkpụ 1mm, nhazi enweghị burrs, elu nkenke, na obere okpomọkụ mmetụta nso.
â – ndIbere ​​onwe ya mepụtara sọftụwia njikwa dabere na Windows, yana nhazi China zuru ezu, yana ọrụ "otu-igodo" dị mfe na ngwa ngwa.
2. Oke oke ngwaahịa (Nkọwapụta) nke CCD Tracing-edge Laser Cutting Machine
355m wavelength, ọkụ ọkụ America, ọkụ SPI
Laser usu Frequency
Mmepụta Pulse Obosara
Mgbapụta Isi Ndụ
Ọnọdụ nyocha nke Galvanometer
100mm / s-ịcha ọkpụrụkpụ emetụta ọnwụ arụmọrụ
Tingcha Slit Width
Linear moto na-akpụ akpụ gantry
Ebumnuche Ebumnuche Motion nke ziri ezi
Ọrụ Mgbasawanye na Mbelata Ọrụ
Akpaka mgbasa na mkpi akwụ dị ka theposition nke MAR mgbe, edo deformation faịlụ
Comprehensive Machining ziri ezi
Okpomọkụ 25 ± 5â „ƒ, enweghị igirigi odide, ala vibration osooso (0.01mm / (s ~ 2)
3.5KW / H na agụụ Cleaner
Ihe ruru. 2500KG na agụụ Cleaner
Nata Format Faịlụ
DXF na GERBER
CCD n'ọnọdu usoro, ike ịmata ndịna n'ọnọdu, withautomatic n'ọnọdu ọrụ
3. Ngwa ntinye:
Ogwe okpuru COB
Mkpisiaka akara modul ọnwụ
Ihe nkiri mkpuchi (CVL)
Tags na-ekpo ọkụ: CCD Tracing-onu Laser tingcha Machine, China, Suppliers, Manufacturers, Factory, Ahịa, Zụrụ
300ml agwakọta ikike agụụ Planet centrifugal igwekota
Oschọ mma agụụ Planet centrifugal igwekota
Vlọ nyocha agụụ Planetary centrifugal igwekota